I-Estriol powder ephezulu (50-27-1) hplc =98% | Ukuqothula amaHormoni aseSifazane
/ Imikhiqizo / AmaHormoni aseSifazane / I-Estradiol powder Series / Estriol powder
SKU: 50-27-1. Categories: I-Estradiol powder Series, AmaHormoni aseSifazane
I-AASraw inokukwazi ukuqala nokukwazi ukukhiqiza kusuka kugramu kuya ku-oda enkulu ye-Estriol powder (i-50-27-1), ngaphansi komthethonqubo we-CGMP kanye nesistimu yokulawula ikhwalithi.
I-Estriol powder i-steroid isrogen yemvelo, kwenzeka kuphela ngesikhathi sokukhulelwa, kwenziwa esibindi sesibindi kanye ne-adrenal androgen steroids enye ye-estrogen e-estriol eyinhloko emadodeni angewona abakhulelwe ayengabonakali. Manje sekuvame ukusetshenziswa njengama-hormone wesifazane omncane.
I-Estriol powder ividiyo
Ama-Raw e-Estriol powder ayisisekelo
Formula Yamamolekhula: C18H24O3
Isisindo somzimba: 288.38100
I-Melt Point: I-280-282 ° C (ivuliwe.)
Ukusetshenziswa kwemifino e-Estriol yama-powder emjikelezweni we-steroids
I-Estriol (i-CAS 50-27-1) ivaliwe nge-E3, enegama lomkhiqizo njengo-Ovestin.
Ukusetshenziswa kokusetshenziswa kwama-Raw Estriol powder
kufaka phakathi ukuphathwa ngomlomo nangokwemvelo. Emakethe, kuvame ukuchazwa kwe-15mg / ukhilimu.
Isexwayiso ku-Raw Estriol powder
Awuvunyelwe ukusebenzisa i-Estriol Uma uthola usizo noma unayo izimpawu ezilandelayo:
Ukusuka kwegazi elingenakutholakali;
i-hyperplasia ye-endometrial engaphenduliwe;
owaziwayo, osolwa noma umdlavuza webele wesandulela;
owaziwa noma osolakala ukuthi u-estrogen oxhomeke emathunjini amabi (njengomdlavuza we-endometrial);
i-thromboembolism yangaphambili noma yangomuso yangomuso (i-vein thrombosis ejulile, i-embolism pulmonary);
i-thromboembolism esebenzayo noma yakamuva ye-arterial (eg angina, infarction ye-myocardial);
isifo sesibindi esicindezelayo, noma isivivinyo somsebenzi wesibindi asikwazi ukubuyiselwa kuvamile;
Ucwaningo lubonisa ukuthi uma i-estrogen engezansi, i-estriol, isetshenziswa ngokweqile, ayikhulise ingozi yamagciwane angaphansi kwesibindi noma i-endometrium (i-uterine lining) .1-3 Nokho, ukuphumelela kwe-estrogenic imiphumela akusho ukuthi i-estriol ayinayo yezinzuzo eziza nge-estrogens ezinamandla kakhulu. Ucwaningo lubonisa ukuthi i-estriol inciphisa izimpawu zokunqamuka kwesikhashana, njengokushisa okushisayo nokumelela kwesisu, kodwa ngephrofayli engcono yokuphepha kuqhathaniswa nama-estrogen amaningi kakhulu. Lokhu kwenza i-estriol ibe yisinqumo esingcono semibandela yokwelapha ye-hormone-replacement-substlacement.
I-Estriol Powder (I-CAS 50-27-1)
I-Raw Estriol powder Marketing
Indlela yokuthenga i-Estriol powder (i-CAS 50-27-1) esuka ku-AASraw
I-AASraw inikeza ubumsulwa 99% Estriol powder obuluhlaza njengama-hormone wesifazane omncane abesifazane abangekho abakhulelwe abonakala bengabonakali.
I-Estriol Raw Powder Recipes: